Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Ukusebenza Okuphephile kwe-Ethiopian Airlines onqenqemeni?
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zase-Ethiopia • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
UTewolde Gebremariam, Isikhulu Esiphezulu se-Ethiopian Airlines
Abantu base-Afrika abasoze bakhohlwa ukuphahlazeka kweBoeing 737 Max Ethiopia nokuthi abezindaba baseNtshonalanga bagijimela kanjani ukusola abashayeli bezindiza baseTopiya! Namuhla u-Boeing uqinisekisiwe ukuthi unecala, futhi ithoni kwabezindaba ishintshile.
Namuhla i-United States ixwayisa abashayeli bezindiza mayelana ne-Addis Ababa International Airport ukuthi bangaphephi ngenxa ye-TPLF TerroristGroup firepower! Alikho iqembu elihlomile elingamasha lingene e-Addis Ababa! Alikho iqembu elihlomile elikwazi ukwenza lokho.
Le miyalezo neminye eminingi igcwele iziteshi zenkundla yezokuxhumana. Iqiniso lihlala i-United States iabashayeli bezindiza abaxwayisa ngokuthi izindiza ezisebenza kwesinye sezindiza ezimatasa kakhulu e-Afrika zingase “zichayeke ngokuqondile noma ngokungaqondile emlilweni wezikhali ezidubulayo kanye/noma imicibisholo ecitshwayo esuka phezulu kuya emoyeni” njengoba Impi yase-Ethiopia eduze nenhloko-dolobha, i-Addis Ababa.
Abantu base-Ethiopia basemaphethelweni ngenxa yezexwayiso zaseMelika kanye nesixwayiso saseMelika sokuthi abaseMelika balishiye izwe.
Umlayezo uthi: Ungasebenzisi Ama-Ethiopian Airlines. Ama-Tweets athi inhloso ukuthi iMelika ikhubaze umnotho wase-Ethiopia. Lena impi engaziwa yi-USA!!!
Iseluleko seFederal Aviation Administration esikhishwe ngoLwesithathu sicaphuna "izingxabano eziqhubekayo" phakathi kwamasosha ase-Ethiopia nezilwi ezisuka enyakatho yeTigray, ezibulale izinkulungwane zabantu onyakeni wempi. I-US kuleli sonto inxuse izakhamizi zayo e-Ethiopia ukuthi "zihambe manje," ithi akumele kube nokulindela ukuphuma kwabantu ngendlela yase-Afghanistan.
Imizamo yosopolitiki yokunqanda ukulwa ihlangabezane nembibizane, kodwa umongameli waseKenya utshele uNobhala Wezwe waseMelika u-Antony Blinken ngoLwesithathu ukuthi undunankulu wase-Ethiopia emhlanganweni obungeSonto unikeze umbono wokuthi ukulungele ukucubungula iziphakamiso ezimbalwa zokunciphisa ukungezwani kanye nokunciphisa udlame, kusho isikhulu soMnyango WezoMbuso.
Okwamanje ama-tweets avela e-Ethiopia afuna i-US ukuthi iyeke ukuthusa abantu, ithi i-Addis Ababa iphephile.
Amanye ama-tweets aphakamisa ukuthi i-African Union ezinze e-Addis Ababa iqoqe yonke into iye kwelinye izwe lase-Afrika.
USihlalo we-African Tourism Board uCuthbert Ncube uthe: “Ngindize i-Ethiopian ngidlula e-Addis Ababa izikhathi ezimbalwa ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi ngahlangana nezikhulu zezindiza.” Abukho ubungozi obuseduze, futhi ubuholi be-Ethiopian Airlines kufanele bethembeke esinqumweni sabo sokusebenzisa inkampani yezindiza ngokuphepha.”
“Ngiyethemba ukuthi kungase kugwemeke ukubhebhetheka kwengxabano yombango”
Novemba 21, 2021 ku-13: 34
Izinkulungwane zabantu sezibulewe. I-Tplf cishe ise-Addis Ababa iqhele ngamakhilomitha angu-100. I-Oromo Libaration Army ihlezi ngaphandle kwe-capitol ilinde i-Tplf ukuze ikwazi ukungena ku-capitol ngama-engeli ahlukene. Baphinde babophe abantu baseTigray enhlokodolobha kodwa bathi kuphephile.
U-PM uhlala e-lala land umkhumbi wakhe uyacwila futhi uzowisa abantu abahle kanye naye.
Novemba 21, 2021 ku-05: 16
Pho kungani emhlabeni umuntu engacabanga ukuthi ukundiza endaweni yempi kuphephile? Siyabona.
Novemba 21, 2021 ku-05: 15
Pho kungani emhlabeni umuntu engacabanga ukuthi ukundiza endaweni yempi kuphephile? Ingabe thina lo mphakathi ondizayo siyiziphukuphuku?